दशै नै हो कि दशा फर्कि आएको ! – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
दशै नै हो कि दशा फर्कि आएको !
दशैँ सबैका लागि आएको थियो । यही दशैं धेरैका लागि दशा पनि बनेको हुनुपर्छ । खर्च बढाएर तनाव, मासु र रक्सीले रोगब्याधी निम्त्याएर पनि उस्तै पीर । दशैँ दशामा परिणत हुने गरेकै कारण योगेश्वर अमात्यले गाएको ‘दशैँ नै हो कि यो मेरा दशा फर्कि आएको’ भन्ने गीत हिट छ । कसरी बनेको रहेछ त्यो गीत ? शुक्रवार साप्ताहिककी सजना बरालले खोजेको गीतको कथा ।
शब्दः प्रेम बस्नेत
संगीतः न्ह्यु वज्राचार्य
गायनः योगेश्वर अमात्य
पहिलो नेपाली रंगिन फिल्म ‘कुमारी’का निर्देशक प्रेम बस्नेत साहित्य लेखनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । कुरा १०÷१२ वर्षअघिको हो । ‘एउटा गीत लेखेको छु, हेर्छौ ?’ भन्दै उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो । मैले ‘हेर्छु, भेटौँ’ भनेँ । दरबारमार्गको नाङ्लो क्याफेमा भेट्यौँ । उहाँले गीत देखाउनुभयो । म हेरेको हे¥यै भएँ । जम्मा दुई लाइनको गीत ! बीचमा संवाद । शैली नौलो थियो । शब्दहरू ‘टू द प्वाइन्ट’ थिए । मलाई गीत गाउन आतुरी भयो । हामी जमलस्थित न्ह्युको ‘डोरेमी स्टुडियो’तिर कुद्यौँ ।
न्ह्यु स्टुडियोमै थियो । शब्द देखायौँ उसलाई । ऊ पनि कम्पोज गर्न तम्सिहाल्यो । तीन मिनेटजतिमै मेलोडी तयार भयो । मैले एकफेर स्वरबद्ध गरिहेरेँ । दुई लाइन त थियो, प्य्राक्टिस पनि के गर्नु ? गरिनँ । कम्पोज गरेको दुई÷तीन दिनपछि गीतलाई जेम्स प्रधानकहाँ पु¥यायौँ । उसले अरेन्जमेन्टको जिम्मा लियो । गीतको काम त हुने भो । बीचका संवाद कसलाई बोल्न लगाउने ? दीपकराज गिरी र दिपाश्री निरौला– न्ह्युले सुझाएका नाम थिए । हामी सहमत भयौँ ।
रेकर्डिङको दिन अझै सम्झिन्छु । जेम्सको स्टुडियोमा काम गर्ने टुंगो भएको थियो । यस गीतका संवादमा केटाकेटीको पनि स्वर चाहिने भएकाले मैले मेरा र दाइका छोराछोरी पनि लिएर जानुपर्ने भयो । स्टुडियो जाँदा बाटामा भेटिएका भुराभुरीलाई पनि बटुलेर लगेको थिएँ । बच्चाबच्चीसहित म स्टुडियो पुग्दा दीपक–दिपाले आफ्नो अंशको रेकर्डिङ सकाइसकका रहेछन् । मैले आफ्नो भागमा परेको दुई लाइन गाएँ । मजाले रक्सी पिउँदै गाएको थिएँ मैले त ! ‘बेलुन ल्याइदिनू, चंगा ल्याइदिनू’ भन्ने डाइलग चाहिँ मेरा छोराछोरीले बोलका हुन् ।
रेकर्डिङ सकिएपछि गीत ‘रिवाइन्ड’ गरेर सुन्यौँ । त्यतिबेला मैले गीतमा एउटा गल्ती पत्ता लगाएँ । दीपकजीले एक ठाउँमा ‘घोर्ले खसी’को सट्टा ‘¥याके खसी’ भन्नुभएछ । मैले यो कुरा उहाँलाई भनेँ । उहाँले ‘झुक्किएर होइन, जानी–जानी यस्तो भनेको हुँ’ भन्नुभयो । वास्तवमा त्यतिबेला ‘¥याक’ शब्द भर्खर प्रचलमा आएको थियो । दीपकजीले ‘रमाइलो त हो नि, राखौँ’ भन्नुभयो । मलाई खासै चित्त बुझेको थिएन । तर, विरोध जनाइनँ । घोर्ले खसी ¥याके भयो ।
यो गीत कुनै एल्बममा छैन । न त यसको म्युजिक भिडियो नै बनायौँ । रेडियोमा बजेकै भरमा यो चर्चित भयो । दसैँताका नै सार्वजनिक गरिएको यस गीतमा नेपालीले महान् र उल्लासमय मान्ने चाड दसैँ, गरीब–दुःखीका लागि बोझ र दशा बनेर आउने कुरा समेटिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारमा घरको मुलीलाई आउने ‘प्रेसर’का विषयमा रचिएको ‘न्यारेटिभ सङ’ हो यो । यसले आफ्नो ल्याकतअनुरूप दसैँ मनाऔँ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
सुनिल सेट्टीले जोगाए नेपाली वालिकाको ज्यान
बिरामी युवतीका अघि डाक्टरको यस्तो हर्कत